Cuntooyinka aadka u sarreeya ee ay tahay inaad ku darto cuntadaada | Bezzia
Toñy Torres | 14/09/2021 20:00 | Tilmaamaha caafimaadka
Marka laga hadlayo nafaqada iyo cuntada, marna ma dhihi kartid wax walba waa qoran yihiin. Sababtoo ah, nasiib wanaag, maalin walba cilmi -baaris cusub iyo daraasado la xiriira cuntada iyo sida ay kuwani noo saameeyaan gudaha. Waxaa la caddeeyay in wax kasta oo la liqo ay si uun ama si kale u saamayso. Si la mid ah sida cuntooyinka qaarkood ay waxyeello u geystaan ​​caafimaadka, kuwa kale ayaa si gaar ah ugu habboon.
Cuntooyinka qaarkood waxaa ku jira walxo iyo nafaqooyin caawiya xoojinta difaaca jirka. Maxaa lagama maarmaan u ah in laga ilaaliyo fayraska, bakteeriyada iyo dhammaan noocyada cudurrada. Cuntooyinkaan waxaa loo yaqaan "superfoods" waxayna ku daraan cuntada si joogto ah, kaa caawin kara inaad noqoto mid caafimaad qaba, ka xoog badan kana ilaaliya gudaha.
1 Waa maxay cuntooyinka waaweyn?
2 Cuntooyinka aadka u sarreeya ee ay tahay inay ku jiraan cuntadaada
2.1 Berry Acai
2.2 Abuurka Chia
2.3 Shaaha Matcha
Waa maxay cuntooyinka waaweyn?
In kasta oo ay sannado hadda noqdeen moodo, haddana cuntooyinka superfood -ka ahi ma aha wax cusub. Way ka badan tahay, waa cuntooyin horeba qayb uga ahaa cuntadeena Mediterranean -ka, sida saliid saytuun. Si kastaba ha ahaatee, inta badan waxa loo yaqaan superfood waa miraha, berry iyo cuntooyinka qalaad, waa waxa iyaga ka dhiga kuwo gaar ah oo la yaab leh inta badan dadka.
Ereyga superfood laftiisu ma laha saldhig cilmiyeed, laakiin waa la aqbalay maxaa yeelay qeexitaankiisu waa mid dhab ah marka la eego sifooyinka nafaqada ee cuntooyinka ku jira liiska mudnaanta leh. Maadaama cuntooyinka waawayn ay yihiin cuntooyin leh qiime nafaqo oo sarreeya oo bixiya faa'iidooyin caafimaad oo weyn, sida antioxidants, fiitamiinno, ama dufan caafimaad qaba.
Cuntooyinka aadka u sarreeya ee ay tahay inay ku jiraan cuntadaada
Liiska cuntooyinka waawayn ayaa aad u sii badanaya, maxaa yeelay waa badeecado ka yimaadda beeraha dabiiciga ah ilaa xad oo shirkado badan ayaa u doodaya cuntooyinka dabiiciga ah iyo kuwa ugu caafimaadka badan. Hadda, waa in la xusuustaa in cuntada keligeed aysan lahayn awood ay ku hormariso caafimaadka. Cunto caafimaad leh waa in la dheellitiraa, kala duwan oo dhexdhexaad ah. Haddii aad sidoo kale ku darto cuntooyinkan aadka u sarreeya, jirkaagu wuxuu ka faa'iideysan doonaa dhammaan guryaha.
Midhahan oo kale oo la mid ah blueberry waa mid ka mid ah kuwa ugu faa'iidada badan caafimaadka sababta oo ah maadada sare ee antioxidants. Sidoo kale, berry açaí waa hodan ku ah omega 3, 6 iyo 9 asiidh dufan ah, amino acid muhiim ah oo aad muhiim ugu ah caafimaadka. Ka mid ah sifooyinkeeda caafimaad ee badan, açaí berry waxay u fiican tahay xoojinta nidaamka difaaca, ka hortagga cudurrada sida kansarka iyo, waxay yiraahdaan, caafimaadka galmada.
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah cuntooyinka ugu caansan ee la yaqaan tan iyo sannado qaarkood miraha chia ay si isa soo taraysa ugu jiraan jikada dhammaan kuwa doonaya inay hagaajiyaan caafimaadka. Waa iniin ay ka buuxaan hanti aad u faa'iido badan, waxaa ka mid ah, waxay hodan ku tahay asiidh dufan oo lagama maarmaan ah, kalsiyum, magnesium iyo maado sare oo fiber ah. Abuurkaasi waa u fiican socodka xiidmaha, wadnaha, sonkorowga ama kolestaroolka, iyo kuwo kale.
Cuntadan aadka u weyn waxaa loo tixgelin karaa inay tahay mid lama huraan ah, maxaa yeelay guryo badan awgood waxay ka mid tahay kuwa ugu faa'iidada badan caafimaadka. Shaaha Matcha wax kale ma aha ee waa nooc ka mid ah shaaha cagaaran oo lagu qaso biyo, taas oo ah, caleenta oo dhan waa la wada cunaa ee ma aha uun faleebo, taas oo ku darsata sifooyin. Antioxidant awood leh oo ka hortaga gabowga gacanta, oo ka mid ah faa'iidooyin caafimaad oo kale oo badan.
Xayawaankan oo ka yimid xidid ka mid ah qoyska sinjibiisha, ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay ka-hortag dabiici ah oo dabiici ah. Waxay u fiican tahay wadnaha, waa anti-bararka, antioxidant-ka oo ku wanaagsan ka-hortagga iyo daaweynta noocyada kansarka qaarkood.
Kuwani waa qaar ka mid ah cuntooyinka waaweyn ee ugu muhiimsan ee la yaqaan, in kasta oo aanay kaligood ahayn. In kasta oo ay aad muhiim u tahay cuntooyinkan ayaa si dheelitiran loogu daray cuntada. Tan iyo markaas uun baa la dhammayn karaa dhammaan hantidiisa iyo dheefaha caafimaadkiisa. Sababtoo ah aad bay muhiim u tahay in taas la xusuusto tiirarka nolosha caafimaadku waa cunto, jimicsi iyo caadooyin caafimaad qaba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Tilmaamaha caafimaadka » Cuntooyinka waaweyn ee ay tahay inaad ku darto cuntadaada